Ireo saka goavambe eo amin'ny tontolony noforonin'i Yuno | Famoronana an-tserasera
Ny saka dia mpandray anjara amin'ny karazan-tantara rehetra, tantara sy ireo GIF mihetsiketsika izay mazàna dia mitaona antsika tsiky na fihomehezana lehibe miaraka amin'ny fihetsika tsy mitovy. Izy ireo dia tena biby fiompiny manokana.
Yuno dia mpanakanto Koreana izay manana ny toetrany mialoha amin'ireto felines ireto ahafahantsika mahita ny sasany izay protagonista amin'ity afisy ity, izay ahitantsika andiana saka izay toa ao amin'ny tontolony manokana izy ireo izay ahafahan'ny olombelona lasa Lilliputians an'ny tantaran'i Gulliver.
Azo antoka fa maro aminareo no manana saka toy ny biby fiompy, na dia maro hafa aza no hanana alalàn'ny alika. Na dia amin'ity indray mitoraka ity aza, ary toy ny amin'ny fotoana tsy fahita firy, satria mety ho avy izy ireo ity mpanakanto ity y ity hafa, ireo mpandray anjara tamin'ny sehatra somary nahaliana fa milamina sy milamina toy inona moa izany.
Toy ny hoe nanao fety ry zareo, dia alain'i Juno alohan'ny seho isan'andro izahay ny fomba fiteny sy ny hevitry ny mpanatrika mitovy amin'ilay toerana misy olona maro mandany andro mahafinaritra eny amoron-dranomasina toa ny fitsangatsanganana. Sary iray izay afaka mamerina antsika amin'ny sasany amin'ireo seho mahazatra indrindra amin'ny sarimihetsika sarimihetsika Studio Gihbli, izay vao andro vitsy lasa izay miresaka momba ny miyakazi hihaona ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany vao tsy ela akory izay.
Juno dia a mpanao sary koreana izay azonao arahana avy amin'ny anao tranokala manokana (tsy miasa amin'izao fotoana izao) sy ny Pixiv. Taratasy izay ahafahanao milaza amin'ny antsipiriany ihany koa ny akanjon'ilay zazavavy mijoro miaraka amin'ny saka eo an-dohany, mitovy amin'ny fijerena ilay sehatra hafahafa hitan'izy ireo.
Raha izany, raha mitady mpanakanto manana ianao predilection ho an'ireo biby tia namana ireoIndraindray ianao dia efa afaka manome tsoratadidy ity mpanakanto Koreana ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Saka goavambe sy sariaka an'i Yuno